vcredist.msi — MYSTERY ZILLION
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable သွင်းတာမရလို့ဗျာ ...
Click OK to try again, or enter an alternate path toafolder containing the installation package 'vcredist.msi' in the box below.
ဒါကြီးပဲလာလာပြောနေတယ် ... vcredist.msi ကလဲ ရှာတာ rapid link တွေကြီးပဲဗျာ ...
rapid acc လေးများရှိရင် ဒေါင်းပြီးတင်ပေးကြပါလားဗျ ...
You can freely download from Microsoft. Why do you need from rapidshare?
မရလို့ပေါ့ဗျာ ... အဲဒီကိုစေတန်ပေးတဲ့လင့်က error တက်နေတယ်လေ ... ကျွန်တော်အပေါ်မှာ ရေးထားတယ်ကော်
အဲတာကြီးပေါ်ပေါ်နေတယ် ... ကိုစေတန်ပေးတဲ့လင့်ဆို ၅-၆ ခါလောက်ဒေါင်းပြီးစမ်းပြီးပြီ... မရဘူးဗျ ... ဘာကြောင့်လဲ မသိဘူး
ဘာလိုနေလဲမသိဘူး ... ကူညီပေးကြပါဦး
aiksai wrote: »
ကျွန်တောှ့ အထင်ကတော့ အရင်သွင်းတုန်းက တစ်ခုခုကြောင် မပြီးဘဲ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ဖြစ်နေလို့ နေမှာပာ။ install path ကို မဖျက်မိဘဲ အသစ်သွင်းတဲ့ အခာ registry ထဲမှာ မှတ်ထားတဲ့ လိပ်စာညွှန်းတဲ့အတိုင်း လိုက်လိုက်ရှာနေလို့ ဖြစ်တာ။ အရင်ဆုံး cleaner တွေသုံးပြီး ရှင်းမှ ပြန်သွင်းနိုင်မယ်ထင်ပာတယ်။ CCleaner ကို သုံးရှင်းပာ။ Auslogics.com က registry cleaner နဲ့ရှင်းကြည့်ပြီးပြန်သွင်းပာ။ ဒာနဲ့ မရရင်တော့ ဒီထက် အဆင့်မြင့်တဲ့ နည်းသုံးရမယ်ထင်တယ်။
PS: http://www.majorgeeks.com/CCleaner_Enhancer_d6547.html ကိုပာဒောင်းပြီး CCleaner မှာထည့်ပေးပာ။ CCleaner Portable မှာလည်း ထည့်နိုင်ပာတယ်။